Precision Machining lwaka CNC lwaka Precision Parts Xa begqiba - WASSER
imveliso Professional machining entle nokulungiswa lathe maching kuzo zonke iintlobo zezixhobo, kuquka Aluminium, Brass, Iron etc; CNC iindawo ngqo processing kunye nemveliso.
WASSER Tek LIMITED uye establised ku-2007 apho ibekwe kwi Yuhang sasaz. Hangzhou isixeko njengoko eyaziwa kwiparadesi esemhlabeni. We nikela ukuba ukunika iimveliso awongamileyo, inkxaso ubuchwepheshe kunye neyaneleyo inkonzo yasemva kwentengiso. Iimveliso ezingundoqo: machining entle nokulungiswa maching lathe kuzo zonke iintlobo zezixhobo, kuquka Aluminium, Brass, Iron etc; CNC iindawo ngqo processing kunye nemveliso.
Le nkampani iye izixhobo advanced imveliso, abasebenzi zobugcisa zobungcali kunye nenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, ngokuhambelana nomgaqo wolawulo ukholo elungileyo, umgangatho ophezulu kunye nexabiso elungileyo siseko ukunika abathengi kunye ngenkonzo epheleleyo. Ukuba sinyuse ixabiso kubaxumi injongo siye njalo ilandelelwe. Sikholelwa ukuba kukho imeko kuphela win-win na icala kuphuhliso lweshishini. Siza, njengesiqhelo, ukuvelisa iimveliso ezisemgangathweni ophezulu ngokuhambelana ngqongqo neemfuno abaxumi bethu ukuze ukubuyisela inkxaso kunye nokuthembela kubaxhasi bethu.
amava Rich technical
amandla emveliso Strong zempahla ekrwada, kunye nokwanda ixesha elide amava obuchule, kunye ukusukela eligqwesayo umgangatho, ukunika abathengi kunye iimveliso kunye neenkonzo.
izinto zomgangatho ophezulu
imveliso Professional nokulungiswa-aluminiyam, nobhedu, nesinyiti kunye nezinye izinto processing, CNC kubekho nokuyifeza processing, abathengi abaninzi baqonde kunye nokuqondwa.
Ukunikezela Quality Products, Service Excellent, Amaxabiso ephikisanayo kunye Delivery ngokukhawuleza. iimveliso zethu athengisa kakuhle zombini kwiimarike basekhaya angaphandle. inkampani wethu uzama ukuba abathengisi enye ebalulekileyo China.
Yakha zomngundo Machine wakho
Sijonge phambili ukuva kuwe, wena ukuba umthengi bebuya okanye entsha. Siyathemba ukuba siya kufumana ntoni na intooyikhangelayo apha, ukuba akunjalo, nceda uqhagamshelane nathi ngoko nangoko. Siyazingca inkonzo kwenotshi lwabathengi phezulu kunye nempendulo. Enkosi ishishini lakho nenkxaso!
Cnc Machining Iintetho , Precision Ukwenziwa Parts , Parts Machining ngqo , Parts Machining , Precision Ubushushu Parts Treatment Process , Cnc ngomshini Iintetho ,